UK Oo Ogalaatay In Dib Loo Bilaabo Cayaaraha Premier League Iyo Championship-ka – Heemaal News Network
UK Oo Ogalaatay In Dib Loo Bilaabo Cayaaraha Premier League Iyo Championship-ka
Golaha Wasiirrada UK ayaa ansixiyey in la fasaxo horyaalka waddanka Ingiriiska in si rasmi ah dib loogu bilaabo bisha June, xilligaas oo ah waqtiga uu maamulka Premier League hore ugu qoondeeyey in ciyaaraha lagu soo laabto.
Horyaalka Premier League oo la joojiyey March 13 markii uu fayraska Korona sida waallida ah ugu faafay waddankaas oo illaa hadda uu ku dilay dad ay tiradoodu ka badan 33,000, ayay dawladdu hadda ogolaanaysaa in dib loo bilaabo, laakiin waxa ku xidhan shuruud kale oo ah in masuuliyiinta caafimaadku ay damaanad-qaadaan badqabka ciyaartoyda, tababareyaasha iyo shaqaalaha.
Wasiirka Dhaqanka, Warbaahinta iyo Isboortiga, Oliver Dowden ayaa shirka Golaha Wasiirrada kaddib waxa uu sheegay in hadda laga bilaabo ay fasax yihiin ciyaaruhu oo la fulin doono qorshaha dib loogu bilaabayo, kaas oo ah in bisha June ay Premier League iyo Championship-ku dib u bilowdaan.
“Shirkii tognaa ee maanta waxa aan ku martigeliyey masuuliyiinta kubadda cagta oo qorsheyaal horumarsan oo dib loogu bilaabayo ciyaaraha England la yimid. Dhamaantayo waxaanu ku heshiinay in kaliya ay ciyaaruhu socon karaan haddii badqab lagu samaynayo sidaas oo la ilaalinayo caafimaadka ciyaartoyda, tababareyaasha iyo shaqaalaha oo mudnaanta koowaad la siinayo.” Ayuu yidhi Oliver Dowden.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata, waxa uu caddeeyey in kubadda cagta Ingiriiska si rasmi ah loo bilaabi doono bisha June, waxaanu yidhi: “Dawladdu waxay albaabada u furaysaa tartamada kubadda cagta inay si badqab ah usoo laabtaan bisha June. Tani waa inay ku jirtaaa fursad ballaadhan oo taageereyaashu u helayaan inay toos ku daawadaan ciyaaraha, iyadoo la hubinayo in dhaqaalaha kusoo laabashada ciyaaraha inay taageereyaan qoyska ballaadhan ee kubadda cagta.”
Masuuliyiinta kubadda cagta ayuu Wasiirku u daayay faahfaahinta qorsheyaasha horyaallada dib loogu soo celinayo, waxaanu yidhi: “Waxay hadda ku xidhan tahay maamullada kubadda cagta inay ogolaadaan, soona dhamaystiraan faahfaahinta qorsheyaashooda, waxaana jirta isku-duubnaan wanaagsan oo tan lagu gaadhayo taageereyaasha, bulshada kubadda cagta iyo guud ahaan dalka.
“Dawladda iyo kubarada caafimaadku waxay sii wadi doonaan inay tilmaanaan, taageeraanna in ciyaaruhu ku socdaan go’aan kasta oo kama dambays ah oo qorsheyaasha loogu beddelayo ficil.”
Qatar Oo 53 Kun Oo Dollar Ku Ganaaxaysa Qofka Aan Qaadan Afdaboolka
Caaisha Romano Oo Markii Ugu Horaysay La Hadashay Taageerayaasheeda